Blacksad. Yonke into iyawa, nguJuanjo Guarnido kunye noJuan Díaz Canales. Uphononongo | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | IiComics, Inoveli emnyama
I-Blacksad 6. Yonke into iyawa - Icandelo lokuqala libali elitsha abalibonisayo UJuanjo Guarnido (umzobo) kunye UJuan Diaz Canales (umbhalo) wale nto umcuphi ikati ukusuka kwi-50s osele egqibe iminyaka engama-20. Kwaye bubunewunewu, njengabo bangaphambili. Ndandisele ndithetha ngabo kunye naye, ngoko ke namhlanje ndigxila kokugqibela. Le yeyam kuhlolwa.
1 I-Blacksad 6. Yonke into iyawa-iCandelo lokuQala-Uphononongo
1.1 Imalunga nantoni kunye nabalinganiswa bayo
IBlacksad 6. Yonke into iyawa-icandelo lokuqala Uphononongo
Ekuqaleni kwe- I-Blacksad 6. Yonke into iyawa - Icandelo lokuqala sibona uncumo oluhlabayo luka ingwenya ebhengeza amabinzana ka Uqhwithela, nguWilliam Shakespeare. Leyo yingqondi yokuqala, njengezinye iivignettes kude kube sekupheleni. Ngaphezulu kwayo yonke into, ibali liqala ngala mazwi akhokelwa nguJohn Blacksad, kwibali lakhe lomntu wokuqala ukusuka ekuqaleni kolu ngcelele. Indawo kwizithunzi.
Obo bomi abuyonto ngaphandle komboniso yinto esiyifundayo sonke. Kwaye mna, ngaphandle kobizo, ndiye ndaba yidrama yobungcali. Abaphulaphuli kunye nomdlali kunye ne-bar evulekileyo yeminqweno ephantsi kunye nosizi lwabantu. Abafana abathuthunjiswayo nabanemibala ngoogxa bam. Ngepanorama enje, andiqondi ukuba kutheni ndisayithanda iqonga.
Kwaye ke, kulungile, awuqhubeki njani? Kuya kufuneka uyenze kuba uyayazi nje ukuba uza kufunda kwaye ubone elinye ibali elibi ngale (isiqwenga) sekati yomcuphi. Kuncinane okuye kwaneliswa kule minyaka ingama-20 yobukho, inyaniso, kuba eweUsibalisele amabali ama-6 kuphela, kodwa anjani! Kwaye le yokugqibela, ukongeza, ingaphakathi Iinxalenye ezi-2. Eyesibini icwangciselwe u-2023, into ekuya kufuneka ixatyiswe kuba ayizukuba ngu-8 esele iwathathile.
Kodwa kungqinwa kwakhona ukuba ababhali babo bathatha ixesha elide kuba nganye nganye iligugu. Ngoku, ngolu luhlu, ibali liqhubeka ngokuzolileyo kwaye licokiseke ngakumbi. Oku kunokubonwa kwaye kuqatshelwe kuphela kwimizobo eneenkcukacha ngakumbi, kwii-vignettes ezingaphezulu kwemifanekiso ye-cinematographic, kodwa nakwiskripthi sika-Díaz Canales, kwelinye icala, eqhubeka ukuyihobisa.
Kwakhona kwenzeka ukuba bobabini kunye no-Guarnido kunye nelo xesha baye bebumba kwaye begqibelela izidalwa zabo kwicwecwe elitsha ngalinye. Njengamaxesha onke, kuya kubakho abo babathandayo, kodwa bonke balungile, nangona kucetyiswa ukuba ukwazi le kitten ukususela ekuzalweni.
Kuya kubakho abo babiza eli bali-okanye lonke uchungechunge-luqikelelwe kakhulu okanye lubethwe zii-clichés, kodwa yiyo loo nto. cliches umsebenzi, ngakumbi kolu hlobo.
UBlacksad unzima njengoko ethandana, a imbeko egqibeleleyo ku Mnyama ngakumbi zakudala, zombini uncwadi kunye ne-cinematographic, ukusuka kwi-aesthetics yayo ukuya kwizikripthi, kwaye, ngakumbi, ukuya eMntla Melika. Ukuzintywilisela kumaphepha ayo kukwenza kuyo Ubugwenxa, Ubuthongo obunguNaphakade, Intshabalalo, Indlela Emnyama okanye Izaphuli-mthetho, apho bawela khona UFilipu Marlowe yeBogart okanye UJeff Bailey nguMitchum on Buyela kwixesha elidlulileyo. Kwaye iwaka elinanye libhekisela kuso nasiphi na isihloko asisayinileyo Hammet, Chandler o izinto ezilungileyo Okanye nayiphi na loo miboniso bhanyabhanya ukusuka kwiminyaka yegolide ye-40 kunye ne-50 kwi-cinema.
Imalunga nantoni kunye nabalinganiswa bayo
En I-Blacksad 6. Yonke into iyawa - Icandelo lokuqala si John Blacksad edolophini emva kweemeko zangaphambili ezenzeka e-Amarillo (eTexas), eNew Orleans okanye eLas Vegas. Kwaye oko kuqalwa ngomdlalo weqonga obonakala uzolile kuya kukhokelela ku iyelenqe lorhwaphilizo kunye nomdla wezopolitiko kumanqanaba aphezulu ebandakanya usodolophu, umakhi obalulekileyo nomalathisi waloo nkampani yethiyetha.
Ngabo kwakhona ngeveki, intatheli ye-tabloid kunye neyona nto ihlekisayo, kunye nokuphikisana nobunzulu kunye nokunyanzeliswa kwe-Blacksad. Noko ke, ngeli xesha udlala a eyona ndima ibalulekileyo neqinisekileyo ekupheleni apho, ngokuqinisekileyo, ishiywe ivuliwe nge Umnqa omkhulu ukuba, akurhanelwa, kunesiphumo esincinci. Okuphikisanayo. Yeyona hit ingcono, i Ngxangxasi I-Anglo-Saxon, eshiya ubusi emilebeni kunye nazo zonke ukulindela kunye nomnqweno yaloo nxalenye yesibini.
Ewe nathi siyaqhubeka sinandipha loo nto ukudalwa kweempawu ze-anthropomorphic tan iimotley njengaye wothuka kwaye nge uphawu olucacileyo lwendlu yeGuarnido, enetyala kakhulu kwiDisney kwaye, ngexesha elifanayo, lithatha yonke i-halo yomntwana okanye engenacala yenkampani yemouse.
Akukho nto efana ne iturkey enekratshi njengobumnyama USodolophu Schumann yaseNew York ayizange ikhankanywe kodwa ibonakaliswe ngokucacileyo kwizakhiwo, ezitalatweni nasezipakini nakwimiqobo yasezidolophini ikhulu leepesenti laseMelika. Kwaye akukho nto ifana ne-a ukhetshe ngenkangeleko egqobhozayo kunye nokuzala okunamandla okumela USolomon, loo makhi odlala nayo yonke into kunye nawo wonke umntu ovela kwiindawo eziphakamileyo ngokungathandabuzekiyo olawula indalo.
Kwaye ukusuka kwezo ndawo ziphakamileyo sihla siye ezantsi komhlaba apho, ngokuqinisekileyo, abasebenzi iintuku, iimpuku okanye iimpuku ebumnyameni be metro. Ummeli wakhe, uKenneth Clark, ngu ibat bafuna ukuphuma endleleni kwaye yiyo loo nto eqesha iBlacksad, ecetyiswa ngu UIris Allen (uLama onobubele), umlawuli wethiyetha apho iBlacksad inqande ukungquzulana namaPolisa apho eli bali liqala khona.
Ke ikati yethu iya kuzenza a abasebenzi abaninzi ukufumanisa kunye nokumisa umntu obethayo (Logan, iingcwangu nezingenamphefumlo ibhere emdaka) eyinxalenye yeqela lemafia elilawula abanye weasels, rhoqo ngocinezelo olubi kunye nokukhumbuza ezo ze Ngubani owaqhatha uroger umvundla?, enye imbali emnyama entle ye-cinema, nangona iphazamisekile kwaye ingumntwana.
Siza kubona kwakhona okokuqala uyilo lwe Yintoni entsha, apho isebenza Weekly, kwaye siya kudibana yakhe entsha Mlawuli, ingqumbo i-porcupine, eye yagqiba ekubeni ibheje ngokuzinikela ngakumbi kunobuntatheli obuchukumisayo.
Abaxhasi abanamandla ngakumbi U-Olaf, inkohlakalo indlela enkulu, Umqhubi kaSolomon kunye nehenchman, kunye Shelby, into engaqondakaliyo ulwandle owenza owona msebenzi umdaka kukhetshe, owusebenzisa phantsi kwesoyikiso.
Zonke zixutywe kule cocktail yethiyetha, ulawulo lwamagunya ezopolitiko kunye nezoshishino kunye neeakhawunti ezindala abanazo. Kwaye wonke umntu baphelele kwiimeko eziphazamisayo -Ngaloo mbonakalo yeenkwenkwezi ekupheleni komlingiswa obaluleke kakhulu we-Blacksad-, ebonisa inxalenye yesibini egcwele imvakalelo kunye nokuqina.
Egqibelele: yonke into.
Okubi kakhulu: ukuba bakhona kuphela Amaphepha ayi-58.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » IiComics » Blacksad. Yonke into iyawa, nguJuanjo Guarnido kunye noJuan Díaz Canales. Uphononongo